10 Talooyin Ku Joogitaanka Qaabashada Intaad Safarka Ku Jirto | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Talooyin Ku Joogitaanka Qaabashada Intaad Safarka Ku Jirto
Joogitaanka qaab ahaan inta aad safreyso shaki la'aan waa caqabad. Cunnooyinka duubitaanka marwalba waa la bixiyaa. Tani waxaa lagu daraa nasasho ah oo ku saabsan jadwalkaaga caadiga ah ee jimicsiga oo badanaa kuu horseedaya inaad ka dhacaan gaari-taaga jirdhiska. Marka sidee qofku isku habboonaan karaa intuu safrayo? Maaha sidii ad u malayn laheed. Kaliya ku dheji dhawr sharciyo fudud oo fudud, jimicsi xoogaa xoog ah, waxaadna ku soo noqon doontaa guriga isla caafimaadkaaga bilaabay fasaxaada.
Soco intaad karti u leedahay si aad u caafimaad qabtid
Inkastoo isticmaalka gaadiidka dadweynaha wuxuu u muuqan karaa sida qorshaha ugu fudud, isku day inaad lugeeyso halkii. Masaafooyinka gaagaaban waxay u fiican yihiin kuwa aan sida daran u qalmin, inkasta oo intaa in ka badan aad sameyso, inta jimicsigaagu sii kordhayo intaad safrayso ayaa korodhsan doona. Socodka dheer ee ciriiriga ahi wuxuu sameyn karaa dhammaan faraqyada marka qaab ahaan lagu jiro iyadoo loo safrayo kuwa mar horeba aad u wanaagsan. Tixgeli inaad ka degtid baskaaga ama tagsigaaga dhowr baloog oo ka horreeya si aad ugu nasato inteeda kale. Tareenadu waa, Dabcan, sidoo kale waa hab wanaagsan oo lagu socodsiiyo ma ahan oo keliya waddan ilaa waddan, laakiin waa magaalo ilaa magaalo iyo xitaa magaalooyinka dhexdooda. Ka bood tareenkaaga dhowr istaag waqti hore, iyo soo qaad boggaga iyo dhawaqa meelaha aad u safreyso fasaxa si aad u kordhiso awoodaada in aad qaab ahaato inta aad safarka ku jirto.
Xir xirmooyinka saxda ah
Haddii aad qorsheyneyso in qaab ahaan aad qaab ahaato inta aad safreyso isku diyaari inaad sii waddo orodka, ama socodka, ama xitaa baaskiil wadista waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad haysato qalabka saxda ah. Maskaxda ku hay inta aad xirxiranayso. Haddii ay tahay inaad kala doorato kabaha kale ee kabaha caqliga leh ama labo ka mid ah hindhisada, xirxiraan hindisada. Ma jiraan wax ka xun wixii aad ku gaarto meel aad u qurux badan, garashada inaad runtii rabto inaad ordo, iyo awood la'aan sababta oo ah waxaad guriga uga tagtay qalabka saxda ah. Waqti hore soo kacidda iyo u orodka guushu waa mid ka mid ah dariiqooyinka ugu wanaagsan ee aragtida lagu arko. Inta qof kale uusan sariirta ka soo bixin, dunida waa xasilloon oo qurux badan. Tan kuma sameyn kartid jaakadaha iyo kabaha in kastoo.
Deji bedel 15 Daqiiqado In Aad Ku Jirto Foolasha Inta Aad Safarka Ku Jirto
Joogitaanka qaab ahaan inta aad safarka ku jirto waa jimicsiga. Ma filan kartid inaad sii waddo muruqyadaada iyo jimicsigaaga inta aad safarka ku jirto haddii aad cunayso cunno badan, cab cabitaano badan, hana sameynin wax tabobaro ah. Kaliya waxaad u baahan tahay 15 Daqiiqado kasto subax kasta si aad uhesho shaqo-yar. Haddii aad joogtid aag dabiici ah sida xeebta, bax inta aysan mashquulin, oo ha ku sameeyo yoga ama tababbar xoog ciidda. Cardio waxaa lagu gaari karaa socodsiin, tug, ama dabbaal deg deg ah. YouTube waxay leedahay fiidiyowyo badan oo waaweyn oo leh fikrado gaagaaban, jimicsiyo fasax ku saleysan si loo ilaaliyo loona hagaajiyo jirdhiska inta lagu jiro safarka. Isku day inaadan xad-dhaaf u isticmaalin fiidkii, maadaama tani saameyn ku yeelan doonto jimicsigaaga subaxa iyo ugu dambeyntiina sida ugu fiican ee aad qaab ahaan ugu sugan tahay inta aad safarka ku jirto.
Feeji Feejignaan Inta Safarka Adigoo Caano Caafimaad qaba
Dhadhan leh, Xaraashka dhaldhalaalka ah iyo waxyaabaha kale ee wanaagsan ayaa laga yaabaa inay kugu garaacaan gadaasha quraaradaha, laakiin had iyo jeer waa fikrad fiican in la ilaaliyo xoog wax u xoog ah oo dhexdhexaad ah. Cun wax lagu daaweeyo, si kasta ha noqotee, laakiin ha dul fuushanin. Qaado xoogaa miro ah quraac, iyo saladh qadada si ay kaaga caawiso joogitaanka qaab ahaan markaad safarka ku jirto. That way you have kept your calories low enough to be able to indulge a bit in a dinner.
Joogitaanka Qaabka Intaad Safarka Ku Jirto Adoo Qaadanaya Jaranjarada
Haddii aad ku nooshahay hoteel leh dabaqyo fara badan, waxaad haysataa fursadda ugu fiican! Halkii aad ka qaadi lahayd wiishka, jaranjarada qaado! Isbeddelkan fudud ee caado waxay maalin walba ka heli doontaa wadne fara badan, waxaanan kuu dejiyaa safar aad u caafimaad badan oo kugu habboon. Hadaadan haysan jaranjarada ama hal duulimaad oo kaliya, ka hel qaar agagaarkaaga ah oo aad kor iyo hoos ugu ordid dhowr jeer si ay kaaga caawiyaan inaad qaab ahaan u ekaato inta aad safrayso.
Wadista Baaskiil Si Aad Ugu Jirto Shaxan Inta Aad Safarka Ku Jirto
Sidan oo kale ayaan kugula talinay inaad lugeeyso halkii aad baska kaxeyn lahayd, Isku day inaad shaqaaleysiiso baaskiil halkii aad ku qaadan lahayd gaadiid. Wadamo badan ayaa lahaan doona bushkuleeti diyaar u ah kiro. Ku qabsado tareenka meesha kuugu dhaw, ka dibna kaxee baaskiil jidka intiisa kale. Markaad rabto inaad soo laabato, si fudud dib ugu noqoshada tareenka oo uga tag baaskiilkaaga meeshii aad ka heshay, waa fiican tahay in muuqaalka lagu sii jiro inta aad safrayso!
Eeg Waxqabadka Deegaanka oo Joogto Wareeg intaad Safarka Ku Jirto
Wadamo badan ayaa leh qorshayaal maxalli ah oo laga qorsheeyay magaalooyinka. Yoga ama calisthenics beeraha nasashada ama socod socod abaabulan inta badan waa la heli karaa. Ku soo biir nashaadaaddan si aad u ahaato qaab ahaan inta aad safarka ku jirto. CrossFit waa ifafaale kale oo adduunka oo dhan ah oo hagaajiya jimicsiga, sidaa darteed wakhti ka bixi jadwalkaaga si aad ugu biirto fasalka, ha ahaato gudaha ama banaanka. Hagahaaga xaafadaha ama xafiiska dhismaha ayaa awoodi kara inuu kuu tilmaamo jihada saxda ah ee kuwan.
U Adeegso Saldhigyada Tareennada iyo Garoomada Diyaaradaha Sida Wadooyinka Socda
Sida ugu xiisaha badan ee safarka tareenka u yahay, ma jiro fursadaas badan ee jimicsiga inta aad guureyso. Isla diyaaradaha ayaa raacaya. Inta aad sugeyso duulimaadkaaga ama tareenkaaga, Fursadda u geli inaad ku dhejiso qaar ka mid ah dhagaha dhagta oo aad u kala bixi weyda garoonka si aad uga caawiso joogitaanka qaab ahaan inta aad safarka ku jirto. Hubso in boorsadaadu marka hore amaan tahay, si kastaba ha ahaatee! Had iyo jeer ka tag alaabtaada qof aad ku kalsoon tahay. Sidaad u socotid, ku daraan qaar ka mid ah sambabaha socodka. Waxaad u ekaan kartaa qosol, laakiin jirkaaga ayaa kugu mahadin doona goor dambe. Joogitaanka qaab ahaan inta aad safarka ku jirto waxay qaadataa fursad kasta oo nafteeda soo bandhigta. Ka dhig tigidhka tareenkaaga halkan hadda, oo naftaada sii wakhti dheeri ah oo aad wax ku ool ah u adeegsan karto Si aad usamayso!
Xirmooyinka Xirmooyinkaaga Jirdhiska Si Aad Ugu Joogto Iskuulka Intaad Safarka Ku Jirto
Xargaha jimicsiga waa kuwa fudud, fududaato in la qaado iyo hab fiican oo lagu gooyo goorta safarka lagu jiro. Waxaad ka dhigi kartaa qolkaaga, iyo abuuro goob-jimicsi mini-jimicsi meelaha bannaan ee ugu habboon. Waqti u bixi maalin kasta inaad sameyso wareeg ama shan wareeg oo wareeg ah, oo ma dareemi doontid xumaan aad ku cuntaan cunista dhammaan waxyaalaha cunnada lagu karsado.
Haysashada is biirsaday barkadda dhexdeeda, ama biir baraf ah oo kujira baararka ayaa markasta fiican. Ka badbadis waxay kuu horseedi doontaa hoos u dhac ku yimaadda jimicsigaaga. Kaliya maaha sonkorta laakiin sidoo kale la'aanta dhiirigelinta maalinta ku xigta. Hayso cabitaanka odd haddii aad rabto, laakiin isku day inaad haysato ugu yaraan. Xusuusnow in is biibiilaha macaan ee sokorta leh ay aad u badan yihiin kalooriyeyaasha, sida biirka iyo xitaa khamriga cad. Iyaga oo ka kaxaynaya inay ku caawiyaan joogitaanka qaab ahaan inta safarka ku jira waxay ka dhigaysaa jimicsiyadaada qorshaysan inay aad uga sii adkaato.
Socdaalku waa wax aad u xiiso badan kiisaska intooda badan. Waa awoodaa, si kastaba ha ahaatee, aad u carqaladeyso nidaam kasta oo taam ah. Joogitaanka qaab ahaan inta aad safarka ku jirto waxay ku dhegan tahay barnaamijka cuntada oo caafimaad leh iyo helitaanka jimicsi badan markasta oo aad kartid. Ha ilaawin inaad xaddidid cabitaannada aalkolada leh ee sokorta leh. Xullo Save A tareenka, waxaan jeclaan laheyn inaan kaa caawino inaad safarkaaga ku raaxeyso!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Talooyin Ku Joogitaanka Qaabashada Intaad Safarka Ku Jirto” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-staying-shape-traveling%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, oo waad baddali kartaa es to fr ama nl iyo luqado badan oo aad doorato.
europetravel	longtrainjourneys	StayFit	JoogIShape	tareen safarka	Travelingtips